Waa kuma hoggaamiyaha Afrikanka ah ee loo maxkamadaynayo dilka xaaskiisii | Berberanews.com
Home WARARKA Waa kuma hoggaamiyaha Afrikanka ah ee loo maxkamadaynayo dilka xaaskiisii
Booliska dalka Lesotho ayaa sheegay in ra’iisul wasaaraha dalkaas, Thomas Thabane, oo da’diisu ay tahay 80 sano jir maanta loo maxkamadeyn doona dilka xaaskiisi hore, Lipolelo Thabane.
Inkastoo uusan Mr Thabane ka hadlin eedeymaha loo soo jeediyay ayaa haddana waxaa uu ku dhawaaqay in uu xilka ka degayo bisha July ee sanadkan, isagoo sheegay inuu hawlgab noqonayo.
Xaaska uu haatan qabo ayaa sidoo kale dhawaan lagu so eedeeyay inay dishay xaaskii lala qabay. Waxa uu noqonayaa hogaamiyihii ugu horreeyay ee Afrikana ah ee lagu eedeeyo inay ku lug lahaa dil isagoo xafiiska haya.
Lipolelo, oo 58 jir ahayd ayaa toogasho lagu dilay laba maalin kahor doorashadii 2017, kahor inta uusan Thabane noqon ra’iisul wasaare.
Markii la dilay xaaskiisa, waxaa uu falkii dhacay ku tilmaamay “axmaqnimo”, balse booliska waxay haatan ku eedeeyeen in uu ku lug lahaa dilka xaaskiisa.
“Booliska waxay hataan ka shaqeynayaan sidii maanta oo Jimca ah maxkamad loo soo taagi lahaa”, ayay sheegeen booliska Lesotho.
Sidoo kale taliye ku xigeenka booliska Lesotho, Paseka Mokete ayaa isna xaqiijiyay in ra’iisul wasaaraha maxkamad lasoo taagi doona maanta oo ay taariikhdu tahay 21-ka bisha Febraayo.
Muxuu arrintan ka yiri ra’iisul wasaaraha?
Mr Thabane oo la hadlay warbaahinta Qaranka ee dalkaasi ayaa sheegay in dalkiisa uu ugu adeegay si hufan, xilkana uu ka degi doona bartamaha sanadkan, waxaana uu yiri: “Waxaan ka shaqeeyay Lesotho xasiloon oo nabad ah, da’da aan haatan joogana waxaa muuqto in aan daalay”.
Xisbiga talada haya ayaa ra’iisul wasaaraha u qabtay in kama dambeys uu isku casilo muddo toddobaad ah.
Waxaa lagu soo warramayaa inay adag tahay in ra’iisul wasaraaha Lesotho uu arintan ka weecdo, waxaana taas ay dalka Lesotho u horseedi doontaa dhibaato dhanka dastuurka ah, maadaama hogaamiye xil haya aanan maxkamad lasoo taagi karin.
Xaaskii hore ee hogaamiyaha Lesotho ayaa la dilay xilli ay kusii jeeday guri ay leeyihiin qoyskooda oo ku yaalla tuulo dhacda duleedka caasimadda Maseru.
Xilliga la dilay waxaa uu khilaaf ku saabsan furriin kala dhaxeeyay ra’iisul wasaare Thabane, waaana xilligaas uu ra’iisul wasaaraha la joogay xaaska uu hataan qabo ee Maesaiah.
Xaaska koowaad ee la dilay ayaa ku guuleysatay in iyada loo aqoonsado haweeneyda koowada ee dalkaas kadib markii maxakamd ay tagtay, arrintaas oo ka hor timid damacii xaaska labaad oo dooneysay in iyada ay noqoto.
Maesaiah oo ah xaaska hataan u dhexda ra’iisul wasaraaha ayaa Thabane kala qeybgashay xafladda dhaarinta iyadoo tacsida ay taalo.
Maesaiah oo lagu soo oogay dacwad ah inay iyada dilka ka dambeysay ayaa lagu soo daayay damaanad lacageed, ilaa iyo haddana ma aysan qiranin wax dembi ah.
Previous articleFeysal Cali Waraabe: ‘Muuse wuxuu doonayaa xisbiya yaryar oo bilaa sharciya inuu sameysto’
Next articleWasiirka Diinta oo furay shirkii u horreeyay ee ay yeeshaan Guddida Wacyigelinta iyo la-dagaallanka Mukhaadaraadka Somaliland